Indy Business Makeover: Rahampitso rahampitso! | Martech Zone
Raha tany ambany tany Houston aho, dia nanamarika ny iray amin'ireo mpandahateny fa ny orinasa iray dia handany vola bebe kokoa amin'ny lobiany noho izy ireo amin'ny azy ireo -tserasera anatrehan'ny. Tsy misy manontany amin'ny mpanamboatra seza fa inona ny fiverenan'ny fampiasam-bola amin'ny sofa vita amin'ny hoditra tsara ho an'ny lobby - fa ny rehetra kosa manapaka sy manapaka amin'ny vidin'ny a tranonkala vaovao.
Betsaka ny orinasa no tsy miraharaha ny paikady mihitsy - sahirana loatra amin'ny paikadiny ankehitriny ka tsy tokony hatahorana an paikady marketing amin'ny Internet. Mahazo mpitsidika bebe kokoa noho ny lobianao ny tranonkalanao miaraka amina endrika sy paikady mahomby ao ambadika ao! Fotoana izao hanamboarana vola, saingy sarotra ny manamarina ny fandaniana… saika tsy azo tanterahina amin'ity toekarena ity. Mandrak'izao…
Raha orinasa any afovoan'i Indiana ianao, ity misy fotoana iray! Ho an'ny orinasa iray eo an-toerana, ny Indy Business Makeover Competition dia ho mpamelombelona mendrika. Ny orinasa mpandresy dia hahazo serivisy marketing, mpizara vaovao, tranokala ary fanaka birao ankoatry ny loka hafa. Miaraka mihoatra ny Vokatra sy serivisy fanomezana $ 80,000 avy amin'ny orinasa eo an-toerana, ny Indy Business Makeover Competition dia nilaza tamin'ny tompona orinasa miasa mafy: “Ankafizo ny fanovana anay, azonareo izany.”
Rahampitso ny fe-potoana fampiharana - 29 Jolay 2009! Zahao ny lisitry ny loka - misy fonosana bilaogy 40 miaraka amin'ny Compendium Blogware koa! Hojereko raha azoko atao ny miteny ny ekipa hamela ahy hanipy fonosana consultant $ 3,000 isan-telo volana any anaty peratra - hanampy amin'ny paikadin'ny votoaty, fampidirana media sosialy, fanaraha-maso ny fiovam-po, sns.
Asa tsara ataon'ny olona at Box kely ary Marketing amin'ny Pivot amin'ny fametrahana ity fifaninanana lehibe ity.
Tags: automatticangona angonahosoka amin'ny takelakaGuy kawasakiIvarshosoka amin'ny takelaka ivarachowder ivaramschmoldtdokam-barotra amin'ny horonan-tsary